16 Zvino ndakanzwa inzwi guru+ rakabva munzvimbo tsvene richiti kungirozi nomwe: “Endai mudururire ndiro nomwe dzokutsamwa+ kwaMwari panyika.” 2 Yokutanga+ yakaenda, ikadururira ndiro yayo panyika.+ Ronda rinorwadza uye rakaipa+ rakava pavanhu vakanga vaine chiratidzo chechikara+ uye vakanga vachinamata mufananidzo+ wacho. 3 Yechipiri+ yakadururira ndiro yayo mugungwa.+ Iro rakava ropa+ seromunhu akafa, uye mweya mipenyu yose yakafa, chokwadi, izvo zvinhu zvaiva mugungwa.+ 4 Yechitatu+ yakadururira ndiro yayo munzizi+ nomuzvitubu zvemvura. Izvo zvakava ropa.+ 5 Ndakanzwa ngirozi yaiva nesimba pamusoro pemvura ichiti: “Imi, Muripo uye makanga muripo,+ Makavimbika,+ makarurama, nokuti izvi ndizvo zvamatonga,+ 6 nokuti ivo vakateura ropa revatsvene nerevaprofita,+ uye imi mavapa ropa+ kuti vanwe. Ivo vakakodzerwa nazvo.”+ 7 Ndakanzwa atari ichiti: “Chokwadi, Jehovha Mwari, Wemasimbaose,+ zvamakatonga ndezvechokwadi uye zvakarurama.”+ 8 Yechina+ yakadururira ndiro yayo pazuva; uye zuva rakabvumirwa kuti ripise+ vanhu nomoto. 9 Vanhu vakapiswa nokupisa kukuru, asi vakamhura zita+ raMwari, ane simba+ pamusoro pematambudziko aya, uye havana kupfidza kuti vamukudze.+ 10 Yechishanu yakadururira ndiro yayo pachigaro choumambo chechikara.+ Umambo hwacho hwakava rima,+ uye vakatanga kutsenga ndimi dzavo nokuda kwokurwadziwa kwavo, 11 asi vakamhura+ Mwari wokudenga nokuda kwokurwadziwa kwavo uye nokuda kwemaronda avo, uye havana kupfidza mabasa avo. 12 Yechitanhatu+ yakadururira ndiro yayo parwizi rukuru rwaYufratesi,+ mvura yarwo ikaoma,+ kuti nzira igadzirirwe madzimambo+ anobva kunobuda nako zuva. 13 Ndakaona kutaura kutatu kwakafuridzirwa+ kusina kuchena kwakanga kwakafanana nematatya+ kuchibuda mumuromo medhiragoni+ nomumuromo mechikara+ nomumuromo momuprofita wenhema.+ 14 Chokwadi, iko kutaura kunofuridzirwa+ nemadhimoni uye kunoita zviratidzo,+ kunoenda kumadzimambo+ enyika yose inogarwa,+ kuti kuaunganidzire kuhondo+ yezuva guru+ raMwari Wemasimbaose.+ 15 “Tarira! Ndiri kuuya sembavha.+ Anofara ndiye anoramba akamuka+ uye anochengeta nguo dzake dzokunze, kuti arege kufamba asina kupfeka vanhu vatarire nyadzi dzake.”+ 16 Iko kwakavaunganidzira kunzvimbo inonzi Ha-Magedhoni muchiHebheru.+ 17 Yechinomwe yakadururira ndiro yayo mumhepo.+ Inzwi guru+ rakabva rabuda munzvimbo tsvene richibva pachigaro choumambo, richiti: “Zvaitika!” 18 Mheni nemanzwi nokutinhira zvakavapo, uye kudengenyeka kwenyika kukuru+ kwakavapo, kwakanga kusati kwamboitika kubvira apo vanhu vakava panyika,+ kudengenyeka kwenyika kwakapararira kwazvo,+ kukuru kwazvo. 19 Guta guru+ rakatsemuka kuva mativi matatu, maguta emarudzi akaparadzwa; uye Bhabhironi Guru+ rakayeukwa pamberi paMwari, kuti aripe kapu yewaini yokutsamwa yehasha dzake.+ 20 Uyewo, zvitsuwa zvose zvakatiza, uye makomo haana kuwanikwa.+ 21 Chimvuramabwe+ chikuru chine matombo, rimwe nerimwe riine uremu hunenge hwetarenda chakawira vanhu chichibva kudenga, uye vanhu vakamhura+ Mwari nokuda kwedambudziko rechimvuramabwe,+ nokuti dambudziko racho rakanga rakakura kwazvo.